Wararka Gudaha – Page 10 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Qarax khasaare dhaliyay oo ka dhacay Wajeer.
All news Barnaamijyo Gaar Ah duruus Maqaalo Sawiro & muuqaalo Suugaan Uncategorized
Al-Shabaab oo cagta mariyay Saldhig ciidan oo ku yaala NFD.
Axmad	 May 5, 2019 0
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala gudaha dhulka Soomaaliyeed ee dowladda Kenya ay gumeysato ayaa weerar culus ku qaaday saldhig ciidan oo ay ku sugnaayeen askar katirsan kuwa KDF-ta Kenya. Weerarka oo ahaa mid…
guuleed	 May 5, 2019 0
qeybta hoose waxaad ka dhagaysan kartaa warka subaxnimo oo saakay lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan kala deg warka subaxnimo 05 05 2019
guuleed	 May 4, 2019 0
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan waxaana lagu soo qaataa wararkii ugu dmabeeyay iyo wareysiyo muhim ah Halkan kala deg dhuuxa wareysiyada 04 05 2019 sax ah
Maxaad kala socotaa Duqeymaha ku xoogeystay Wuqooyiga Suuriya?
Axmad	 May 4, 2019 0
Magaalooyinka iyo deegaannada wuqooyiga dalka Suuriya ee ay gacanta ku hayaan kooxaha JIhaadiyiinta iyo Mucaaradka ayaa waxa kusii xoogeysatay duqeymaha ay ku garaacayaan diyaaradaha Ruushka iyo kuwa Nidaamka. Saacadihii lasoo dhaafay…
Dagaal xoogan oo ka dhacay magaalada Marko.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay waxay weerar culus ku qaadeen saldhigyada Shisheeyaha iyo kuwa ciidamada dowladda ay ku leeyihiin magaalada Marko ee xarunta gobolka Shabeellaha hoose. Dagaallada oo dhowr jiho ay ka…
waxaan idin soo gudbinaynaa warka duhurnimo oo maanta lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan kala deg warka duhurnimo 04 05 2019
Dagaallo ba’an oo ka socda dalka Itoobiya.
Wararka ka imaanaya wadanka Itoobiya ayaa ku waramaya in dagaallo xoogan ay ka dhacayaan qeybo kamid ah gobollada ay degaan Amxaarada, kuwaas oo u dhexeeya qowmiyado dega wadankaas. Dagaallo dhacay maalintii shalay oo Jimco ahayd ayaa…
qeybta hoose waxaannu idinkugu soo gudbinaynaa warka subaxnimo oo lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan kala deg warka subaxnimo 04 05 2019.
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 28-08-1440
Axmad	 May 3, 2019 0
Barnaamijka Dhacdooyinka dunida islaamka waa todobaadle maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan laguna soo qaato akhbaaraadkii ugu waaweynaa caalamka. Halkan ka dhagyaso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka…
Dhageyso Barnaamijka Diiradda Jimcaha oo Uu Marti Ku Ahaa Sh/Nuur M. C/raxmaan.
cusmaan	 May 3, 2019 0
Diiradda Jimcaha waa barnaamij todobaadle ah oo maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan laguna soo qaato mowduuc muhim ah. Maanta waxaa marti ku ahaa Sheekh Nuur Macallim Cabdiraxmaan. Halkan Ka Degso Diiradda…